Madaxwayne Farmaajo oo Shaqadda ka eryay La Taliyihiisa Amniga. – Hornafrik Media Network
Maamulka Balcad: “Weerar ayaa nagu socda, maxaan ku samaynay Farmaajo iyo Kheyre?
Hadalladii ugu kululaa ee dooddii maanta ee BF ka yeeshay sharciga doorashooyinka
Maamulka HirShabelle oo caddeeyey mowqifkiisa ku aadan doorashada 2020
Maxay tahay sababta wasiir Maareeye looga dalbaday inuu hor yimaado Golaha Shacabka?
Qaabka uu u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen SYL…
Xasan Sheekh Maxamuud: “Inaan Joogo Jeclaayaa dalkaan dani uguma jirto”
Muxuu qabanayaa Machadka Diblomaasiyadda Soomaaliya?
Askar badan oo ka baxay Ciidanka Qaranka Ethiopia iyo hoos u dhac ku yimid
Madaxwayne Farmaajo oo Shaqadda ka eryay La Taliyihiisa Amniga.
By HornAfrik	 On Jun 26, 2017
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somalia, Maxamad C/laahi Farmaajo ayaa Shaqadda ka eryay La Taliyihiisa Amniga, Xuseen Damuumaaye oo lagu eedeeyay inuu gacan saar la leeyahay Itoobiya iyo Imaaraadka. Waxaana soo jeediyay in la eryo Agaasimaha Madaxtooyadda Fahad Yaasiin.
Xuseen Damuumaaye oo markii la magacaabay Madaxwayne Farmaajo uu u magacaabay La Taliyihiisa Amniga ayaa ku soo biiray Nabadsugidda Somalia 2012-kii, isagoo aan lahayn Wax Darajo Ciidan ah. Wuxuuna Mudadaasi kooban ku noqday Gaashaanle Sare, taasoo ay dad badan is waydiinayaan siday ku dhici karto in Waqtigaasi uu ku gaaro Kornayl.
Saraakiil ka tirsan Madaxtooyadda Somalia ayaa u sheegay Hornafrik in looga shakiyay Damuumaaye inuu Xogta Madaxtooyadda Somalia u gudbiyo Imaaraadka iyo Itoobiya oo uu ku xiran yahay Sirdoonkooda. Waana sababta keentay in Dawladda Somalia ay ka eriso Shaqadda.
Somalia ayaa ku sii dhex milmaysa Khilaafka u dhaxeeya Wadamadda Khaliijka oo gaaray heerkiisii ugu xumaa.
Madaxweyne Farmaajo oo Somaliland ugu baaqay Midnimo
Dawladda Qatar oo Lacag siisay Madaxda Somalia, iyo UAE oo joojisay Mashaariicdii ay ka haysay Somalia.
Qaabka uu u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen…
Liibaan Nuur	 Dec 11, 2019 0
Xasan Sheekh Maxamuud: “Inaan Joogo Jeclaayaa dalkaan dani uguma…
Askar badan oo ka baxay Ciidanka Qaranka Ethiopia iyo hoos u dhac ku…
NISA oo soo bandhigtay Shabaab la qabtay xilli uu weerar qorsheynayey
Erdogan oo si adag u difaacay heshiis dhan badda ah oo uu la galay…
Mareykanka oo mallaayiin dollar dul dhigay madaxa xubin sare oo ka…
DFS oo digniin ka soo saartay roobab dabeylo wata oo ku soo wajahan…
Somalia: police ends Al-Shabaab siege in SYL hotel
Al Shabaab commander in Wajir bus attack was local head teacher
Regional feuds and clannism to decide Somalia election
Al-shabaab Killed eight people in northern Kenya
Security Council adopts resolution on Somalia piracy
Al-Shabaab destroy communication mast, Xinhua
International community reaffirms support for one man one vote in…
Al Shabaab commander in Wajir bus attack was local head…